दशै‌ं अफर, सस्तो मुल्यको पल्सर बाइक…..( मूल्य सहित ) – Khabar PatrikaNp
September 28, 2020 323
काठमाडौं / बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधि कारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले आजबाट चाडपर्व लक्षित ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले ल्याएको ग्राहक योजनामा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा पल्सर १२५ किन्ने सोच बनाएका ग्राहकले मासिक ८ हजार ८८७ रुपैयाँ किस्ता तिरेर किन्न सक्ने छन् ।
Prevमत्स्यनारायण मेलामा आरती र फूलप्रसाद बाँड्ने बेला मात्र देवताको दर्शन गर्न सक्ने
Nextविहानै देखिएका यस्ता ५ चिजले दिनेछ राम्रो संकेत….!
टिकटक बनाउने कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने
काठमाडौमा १५ दिने शिशुमा कोरोना संक्रमण, सबै मिलि स्वास्थ लाभको कामना गरौ !
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बलात्कारी समूह (रेपर एसोशिएसन) बनाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29678)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28285)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27832)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24647)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22215)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20935)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15597)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14935)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13600)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13311)
दुःखद खबर – दशैंको दिन दक्षिण कोरियामा एक नेपालीको दुःखद निधन ! हार्दिक श्रद्दान्जली !!!
झापामा गायिका रचना रिमालको घर यस्तो छ… (भिडियो सहित)
बाघले चारैतिरबाट घेरेपछि हावामा उड्यो भैँसी (भिडियोसहित)
३० दिन बित्दा पनि घर आइन चन्द्रकला | कान्छी छोरिको अवस्था ग’म्भिर …घर घेरे गाउलेहरुले (भिडियो)